06/02/2019 Arakan Army ABOUT US 0
Maj. General Twan Mrat Naing
Commander in Chief of Arakan Army(AA)
President of United League of Arakan(ULA
Colonel Nyo Twan Awng
2nd In Command of Arakan Army(AA)
General Secretary of United League of Arakan(ULA)
Established on April 10, 2009 Arakan Army led by Arakan’s youger generations, has become one of the most credibility army forces in Burma fighting for self-determination, national equality, justice and freedom. In solidarity with all ethnic people who are have been struggling in Burma and with the Arakanese around the globe in particular, we pursue our mission with excellence, compassion and modesty to protect our fatherland. Profoundly guided by inspirations of our faith, value, legacy and true vision that unite us asapeople—we are committed to meet the tests of history; it defines our destiny. The land of Arakan belongs to the people of Arakan. To protect our ancestral land is the price of our freedom. No one should be denied the right to determine their own destiny, to be free of oppression—because freedom of expression is universal aspiration of humanity.
The vision of Arakan is our proud inheritance from the very beginning of our national movement. We the Arakan Army continued our national struggle–and we recommit ourselves to the freedom that is at the heart of Arakan in which every citizen can livealife of dignity, self-respect, decency and hope, where every citizen feels proud to say—I am Arakanese.
The land of Arakan is indeed promising, due to the spirit of our people–the creativity, optimism, determination and faith of Arakanese. We Arakanese today are passing through the most crucial phase of history, facing many challenges. Although we have faced serious challenges together–and we are compelled to faceachoice. Together we can create life of dignity for our own future as we belonged toapromised land where our forefather’s unfolding memories tell us of the price past generations have paid so we might live in freedom. They had indeed doneagreat service for the cause of freedom and human dignity reminds us also of legacy for our generation we must meaningfully left behind.
History can be rewritten, but we are obviously facing to the tasks of history to engrave the lives of our history much about the ideas that unite us in our diversity, the values that sustain us in time of trial, and the vision that inspires generation after generation of the Arakanese to perform extraordinary acts of service committing to life, liberty and the pursuit of happiness. Time is now shaking the will and spirit of Arakanese and their character to show once again to be united people withastrong and confidence. Every human being has desire to live in freedom and peace. There is no compromise to the freedom we hold dear. By our will and courage we can achieve to the goal of the liberty and freedom we have long been denied.
As true spirit of Arakanese, we must show our greatness, not just for message, our determination must be strongest to the Arakan. Instead of the different ideologies that almost destroyed our unity and the way of life, let us share the burden and responsibilities as true Arakanese, so that together we can address challenges threatening to our ancestral land together.
By putting the shade of differences aside we must address the source of the problems we face today proving Arakan’s character of unity mutually is pledging our lives, our fortunes, and our sacred honor. We all believe that Arakan’s unity is in the hearts and minds of Arakanese whose dedicated commitment and true vision will teach our generations the values that lend meaning to our lives and the life of our nation. These courageous efforts and bold decision made in the cause of unity will be long accomplishment and remembered in the history of Arakan.
The most important and challenging issues Arakanese have to address are called to great responsibilities we are duty-bound to meet them with opportunity and obligation. Commitment, collectivity and hard-work are fundamental principle for us to come forward. Equitable partnership based on national interest is the only means to achieve our unity. The Arakan Army firmly believed that national unity is the only way to sustain the hard won independence.
How to support Arakan Army
There are different ways to support Arakan Army and its activities. By supporting us, you are standing in solidarity Arakan Army in the mission to defend our father land.
We the Arakan Army continued our mission for our values, our national interests and security. Your support can change lives of Arakanes people and its history. We deeply honor and appreciate each and every contribution as an integral part of what Arakan Army is able to accomplish.
Arakan Army Flag
ရက္ခိုင့်တပ်မတော်၏အလံတော်တွင် အောက်ခံအရောင်အဖြစ် အထက်ဘက်တွင် အပြာရောင်နှင့် အောက်ဘက်တွင် အနီရောင် တစ်ဝက်စီဖြင့် အချိုးကျပေါင်းစပ်ထားသည်။ အပြာရောင်မှာ ငြိမ်းချမ်းခြင်း ၊ အေးချမ်းခြင်း ၊ တည်ကြည်လေးနက်ခြင်းဟု အဓိပ္ပါယ်ရပြီး ရက္ခိုင်ရိုးမတောင်တန်းနှင့် ရက္ခိုင်ပင်လယ်ပြင်တို့ကို ကိုယ်စားပြုသည်။ အနီရောင်မှာ ရက္ခိုင်တို့ ကြီးကျယ်ခန်းနားမှု ၊ မျိုးချစ်စိတ်ထက်သန်မှုတို့ကို ဖော်ဆောင်နေသည်။
အလံတော်၏အလယ်ဗဟိုတည့်တည့်တွင် ခုနှစ်ထောင့်ကြယ်နီတစ်ပွင့်ပါဝင်ပြီး ၄င်းအား တစ်ဆယ့်ရှစ်ပွင့်ပါဝင်သော ရွှေရောင်သဇင်ပန်းခက်နှစ်ခက်က ဘေးတစ်ဘက်တစ်ချက်စီမှ ၀န်းရံထားသည်။ ကြယ်နီတွင်ပါဝင်သော ထောင့်ခုနှစ်ထောင့်မှာ ရက္ခိုင်မျိုးနွယ်စုများဖြစ်သော ရက္ခိုင် ၊ ခမီ ၊ မြို ၊ သက် ၊ ဒိုင်းနက် ၊ မရမာကြီး ၊ ကမန်စသော မျိုးနွယ်စုခုနှစ်မျိုးကို ကိုယ်စားပြုထားသကဲ့သို့ ဓည၀တီ ၊ မေဃ၀တီ ၊ ရမ္မ၀တီ ၊ ဒွါရာဝတီ ၊ ဇေယျဝတီ ၊ သလ္လာဝတီ ၊ မောရ၀တီ ဟူသော ကုံလုံပြည့်စုံကြွယ်ဝသည့် ၀တီခုနှစ်ရပ်ကို ကိုယ်စားပြုပြီး စည်းလုံးညီညွှတ်ခြင်းကို ဖော်ဆောင်သည်။ အနီရောင်သည် ရဲရင့်ပြတ်သားခြင်း ၊ ရဲစွမ်းသတ္တိရှိခြင်းဟု အဓိပ္ပါယ်ရသည်။
ကြယ်နီအား အနားကွပ်ထားသည့် အဖြူရောင်သည်ကား သန့်ရှင်းစင်ကြယ်ခြင်း ၊ အမျိုးသီလနှစ်ဌာနကို ထိန်းသိမ်းစောင့်ရှောင့်တတ်သော ရက္ခိုင်မျိုးရိုး၏ မြင့်မြတ်သော ဂုဏ်သိက္ခာကို ဖော်ပြနေသည်။
ရွှေရောင်သဇင်ပန်းနှစ်ခက်မှာကား မြင့်မြတ်ခြင်း ၊ တင့်တယ်ခြင်း ၊ တော်ဝင်ခြင်း စသောဂုဏ်ပုဒ်တို့ဖြင့် ပြည့်စုံနေပြီး ရက္ခိုင်နိုင်ငံတော် ဘုန်းမီးနေလ ထွန်းတောက်ပခဲ့သော ရွှေရောင်ခေတ်ကာလတို့ကို ရည်ညွှန်းသည်။
ဦးခေါင်းတွင် အဖြူရောင်၇ှိသော ဒေါင်းရန်(၀ံလက်)ဌက်က ကြယ်နီကို တောင်ပံဖြန့်၍ ရင်ထဲနှလုံးအိမ်ထဲတွင် ပိုက်ထွေးအုပ်မိုး ကာကွယ်ထားသည်။ ဒေါင်းရန်(၀ံလက်)ဌက်သည် ရက္ခိုင်ပင်လယ်ပြင်နှင့် မြင့်မားမတ်စောက်သောကျောက်ဆောင်၊ကျောက်တန်းတို့တွင် ရှင်သန်နေထိုင်ကျက်စားလေ့ရှိပြီး ရက္ခိုင်သမိုင်းအဆက်ဆက် တပ်မတော်အသီးသီး၏ အမှတ်အသား သင်္ကေတအဖြစ် ဂုဏ်ယူဝင့်ကြွားစွာ အသုံးပြုခဲ့သောကြောင့် တပ်မတော်၏အမွေကို ဆက်ခံပြီး ရက္ခိုင်ပြည်သူလူထု၏ အသက်အိုးအိမ်စည်းစိမ်တို့ကို တောင်ပံဖြန့်၍ ကာကွယ်စောင့်ရှောက်ခြင်းဟူသော ဂုဏ်ပုဒ်ကို ကိုယ်စားပြုသည်။
ရက္ခိုင့်တပ်မတော်အလံ၏ အရွယ်အစားမှာ အလျား(၇)ပေ ၊ အနံ(၄)ပေ ရှိပြီး အောက်ခံအနီရောင်(၂)ပေနှင့် အပေါ်အပြာရောင်(၂)ပေတို့မှာ အချိုးညီစွာပေါင်းစပ်ထားသည်။
ရက္ခိုင့်တပ်မတော်”ဘတ်”တံဆိပ်သည် ရက္ခိုင့်အလံပေါ်တွင် အခြေခံထားသည်။ ရက္ခိုင့်တပ်မတော် ဘတ်တံဆိပ်သည် အလျား(၉)စင်တီမီတာ ၊ အနံ(၇)စင်တီမီတာရှိသော ဘဲဥပုံအ၀ိုင်းဖြစ်သည်။ အတွင်းဘက်စက်ဝန်းသည် အပြာရောင်ဖြစ်ပြီး ငြိမ်းချမ်းခြင်း ၊ အေးချမ်းခြင်း ၊ တည်ကြည်လေးနက်ခြင်းဟူသော အဓိပ္ပါယ်ရပြီး ရက္ခိုင်ရိုးမတောင်တန်းနှင့် ရက္ခိုင်ပင်လယ်ပြင်ကို ကိုယ်စားပြုသည်။ အပြင်ဘက်စက်ဝန်းမှာ အနီရောင်ဖြစ်ပြီး ရက္ခိုင်တို့၏ ကြီးကျယ်ခန်းနားမှု ၊ မျိုးချစ်စိတ်ထက်သန်မှုတို့ကို ဖော်ဆောင်နေသည်။
ဘတ်တံဆိပ်၏အတွင်းဘက်စက်ဝန်း အလယ်ဗဟိုတည့်တည့်တွင် ခုနှစ်ထောင့်အနီရောင်ကြယ်တစ်လုံးပါဝင်သည်။ကြယ်နီတွင်ပါဝင်သော ထောင့်ခုနှစ်ထောင့်မှာ ရက္ခိုင်မျိုးနွယ်စုများဖြစ်သော ရက္ခိုင် ၊ ခမီ ၊ မြို ၊ သက် ၊ ဒိုင်းနက် ၊ မရမာကြီး ၊ ကမန်စသော မျိုးနွယ်စုခုနှစ်မျိုးကို ကိုယ်စားပြုထားသကဲ့သို့ ဓည၀တီ ၊ မေဃ၀တီ ၊ ရမ္မာဝတီ ၊ ဒွါရ၀တီ ၊ ဇေယျဝတီ ၊ သလ္လာဝတီ ၊ မောရ၀တီဟူသော ကုံလုံပြည့်စုံကြွယ်ဝသည့် ၀တီခုနှစ်ရပ်ကို ကိုယ်စားပြုပြီး စည်းလုံးညီညွတ်ခြင်းကို ဖောဆောင်သည်။ အနီရောင်မှာ ရဲရင့်ပြတ်သားခြင်း ၊ ရဲစွမ်းသတ္တိရှိခြင်းဟု အဓိပ္ပါယ်ရသည်။
ကြယ်နီ၏တစ်ဘက်တစ်ချက်တွင် တစ်ဆယ့်ရှစ်ပွင့်စီပါသောရွှေရောင်သဇင်ပန်းခက်နှစ်ခက်က ဘေးမှဝန်းရံထားသည်။ရွှေရောင်သဇင်ပန်းခက် နှစ်ခက်မှာကား မြင့်မြတ်ခြင်း ၊ တင့်တယ်ခြင်း ၊ တော်ဝင်ခြင်းစသော ဂုဏ်ပုဒ်တို့ဖြင့် ပြည့်စုံနေပြီး ရက္ခိုင်နိုင်ငံတော် ဘုန်းမီးနေလထွန်းလင်းတောက်ပခဲ့သော ရွှေရောင်ခေတ်ကာလတို့ကို ရည်ညွှန်းသည်။
ကြယ်နီ၏အထက်တွင် ဦးခေါင်းအဖြူရောင်ရှိသော ဒေါင်းရန်(၀ံလက်)ဌက်က ကြယ်နီကိုတောင်ပံဖြန့်၍ ရင်ထဲနှလုံးအိမ်ထဲတွင် ပိုက်ထွေးအုပ်မိုးကာကွယ်ထားသည်။ ဒေါင်းရန်(၀ံလက်)ဌက်သည် ရက္ခိုင်ပင်လယ်ပြင်နှင့် မြင့်မားမတ်စောက်သော ကျောက်ဆောင်ကျောက်တန်းတို့တွင် ရှင်သန်နေထိုင်ကျက်စားလေ့ရှိပြီး ရက္ခိုင်သမိုင်းအဆက်ဆက် တပ်မတော်အသီးသီး၏ အမှတ်အသား သင်္ကေတအဖြစ် ဂုဏ်ယူဝင့်ကြွားစွာ အသုံးပြုခဲ့သောကြောင့် တပ်မတော်အမွေကို ဆက်ခံခြင်း ရက္ခိုင်ပြည်သူလူထု၏ အသက်အိုးအိမ်စည်းစိမ်တို့ကို တောင်ပံဖြန့် ကာကွယ်စောင့်ရှောင့်ခြင်းဟူသော ဂုဏ်ပုဒ်ကို ကိုယ်စားပြုသည်။
အပြင်ဘက်စက်ဝန်း၏ အထက်ဘက်ခြမ်းတွင် “ကျွန်ုပ်တို့၏ အဖမြေကို ကာကွယ်စောင့်ရှေက်ြသူများ”ဟု အဓိပ္ပါယ်ရသော English စာတန်း “Defenders Of Our Fatherland” ကို ဖော်ပြထားသည်။စက်ဝန်း၏ အောက်ဘက်ခြမ်းတွင် “ရက္ခိုင့်တပ်မတော်ကို “Arakan Army” ဟူသော English စာတန်းဖြင့် ရေးထိုးထားသည်။ ။ယင်းစာတန်းနှစ်ခုကြားတွင် လေးထောင့်ကြယ် တစ်ဖက်တစ်လုံးစီ ကြားခံပေးထားသည်။ လေးထောင့်ကြယ်သည် ရက္ခိုင်လူမျိုးတို့၏ ဂုဏ်ယူဖွယ်ရာ ဓည၀တီ ၊ ဝေသာလီ ၊ လေးမြို့နှင့် မြောက်ဦးဟူသော ရက္ခိုင်သမိုင်း၏ ကြီးကျယ်ခန်းနားသော ခေတ်လေးခေတ်ကို ကိုယ်စားပြုသည်။
အနီရောင်အောက်ခံ အပြင်ဘက်စက်ဝန်းပေါ်မှ စာသားတို့မှာ အမျိုးသားလုံခြုံရေးနှင့်နိုင်ငံတော်အချုပ်အချာအာဏာ ကာကွယ်ရေးတာဝန်ကို အပြည့်အ၀ထမ်းဆောင်ပြီး နိုင်ငံနှင့်လူမျိုးအပေါ် ကျရောက်လာနိုင်သော အတွင်းရန်သူ ၊ အပြင်ရန်သူတို့ကို တော်လှန်တိုက်ခိုက်ရေးအတွက် စွန့်လွှတ်ပေးဆပ်နေကြသော ရက္ခိုင့်တပ်မတော်နှင့် ရက္ခိုင်စစ်သည်တော်တို့ကို ကိုယ်စားပြုဖော်ပြထားခြင်းဖြစ်သည်။ ရက္ခိုင့်တပ်မတော်၏ အလံတော်နှင့် ဘတ်တံဆိပ်တို့သည် ရက္ခိုင်လူမျိုးတို့၏ အတိတ် ၊ ပစ္စုပ္ပန် ၊ အနာဂါတ် ဟူသော ကာလသုံးရပ်ကို ခြုံငြုံဆက်စပ်ထားသည်။
ဗမာစစ်တပ်ထံမှ သိမ်းဆည်းရမိသော လက်နက်ခဲယမ်းနှင့် စစ်အသုံးဆောင်ပစ္စည်းများ